Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Cisbitaalka iyo Xarumaha Waadhka > Qalabka Durida iyo Faleebada
Qalabka la isku duro iyo faleebo waa qalab caafimaad oo caadi ah. Horaantii qarnigii 15aad, Kartinel Talyaanigu wuxuu soo bandhigay mabda'a saliingaha. Gaas ama dareere ayaa laga soo saaraa ama lagu duraa inta badan irbad. Silingooyinka waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu duro qalabyada caafimaadka, weelasha, iyo qaar ka mid ah qalabka sayniska ee chromatography iyada oo loo marayo diaphragm caag ah.
Qalabka la isku duro iyo faleebada waa kacaan samaynta waayihii hore ee qalabka caafimaadka. Soo saarista iyo duritaanka gaaska ama dareeraha irbadda waxaa loo yaqaannaa duritaanka. Silinjka cirifka hore oo leh dalool yar oo u dhigma usha xudunta u ah piston, oo loo isticmaalo in lagu duro qadar yar oo dareere ah ama habka meelaha kale ee aan la geli karin ama meesha, wakhtiga usha xudunta u soo jiid dareere ama gaas godadka hore ee dhululubada nuugista, mandrel waa moodada in la tuujiyo dareeraha ama gaaska.
Qalabka duritaanka iyo faleebada waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu duro qalabka caafimaadka, weelasha, iyo qaar ka mid ah qalabka sayniska ee chromatography iyada oo loo marayo diaphragm caag ah. Duridda gaaska xididdada dhiigga waxay sababi kartaa embolism hawo. Habka hawada looga saaro saliingaha si looga fogaado embolism waa in saliingaha hoos loo rogo, si tartiib ah u tuujiyo, ka dibna laga soo saaro wax yar oo dareere ah ka hor intaadan gelin dhiigga.
Qalabka la isku duro iyo faleebo waxa laga samayn karaa caag ama galaas oo badiyaa waxay leeyihiin miisaan muujinaya mugga dareeraha ku jira saliingaha. Saliingadaha dhalooyinka waxa lagu jeermi karaa autoclaves, laakiin sababtoo ah saliingadaha caagga ah waa ka raqiisan yihiin in la tuuro, saliingadaha casriga ah waxay inta badan ka samaysan yihiin caag, taas oo sii yaraynaysa khatarta cudurrada dhiigga ka dhasha. Dib-u-isticmaalka irbadaha iyo saliingadaha waxay la xidhiidha faafitaanka cudurrada, gaar ahaan HIV iyo cagaarshow, ee isticmaalayaasha daroogada xididka.
Qalabka la isku duro iyo faleebada, ama duritaanka mugga sare, waxaa loola jeedaa qiyaaso badan oo irbado ah oo lagu muday jirka faleebo xididada, si loogu isticmaalo waqti ka badan 100ml. Waa laan ka mid ah irbado la isku duro, oo badiyaa lagu baakadeeyay dhalooyin ama dhalooyin faleebo caag ah oo aan ku jirin walxaha bakteeriyada. Heerka dhibicda waxaa lagu hagaajiyaa aaladda faleebada si joogto ah oo joogto ah daawada loogu duro jirka.
Muuqashada saliingaha caafimaadku waa kacaan-samaynta waayaha ee dhinaca qalabka caafimaadka. Habka sawiridda ama duritaanka gaaska ama dareeraha irbadda waxaa loo yaqaannaa duritaanka. Silinjka cirifka hore oo leh dalool yar oo u dhigma usha xudunta u ah piston, oo loo isticmaalo in lagu duro qadar yar oo dareere ah ama habka meelaha kale ee aan la geli karin ama meesha, wakhtiga usha xudunta u soo jiid dareere ama gaas godadka hore ee dhululubada nuugista, mandrel waa moodada in la tuujiyo dareeraha ama gaaska.
Dhalada Daawada leh oo dhalaalaya oo hufan, fududahay in la jeermiyo, iska caabin daxalka, iska caabinta heerkulka sare, waxqabadka shaabadeeyey waa sugitaan wanaagsan sifo, weli xal faleebo caadiga ah, antibiotics, budada guud, baraf-qallalan, tallaalada, dhiigga, iyo wakiilada noole ee Doorashada baakadaha, inta badan iyadoo la isticmaalayo baakadaha muraayadaha dawooyinka, badiyaa waa xakamaynta dhalooyinka dareeraha ee cad, brown, afka iyo dhalooyinka daawaynta ee brown
Joojiyaha Dhalooyinka Caafimaadka
Dhalo-joojin caafimaad oo leh qaab iyo cabbir gaar ah, oo loo isticmaalo in lagu xidho afka dhalooyinka, balaastigga iyo weelka dhalada kale ee caafimaadka. Qaab-dhismeedkeeda waxa loo qaybin karaa qiyaas ahaan saddex nooc: konical, T-qaabeeya iyo flanged. Waxa loo qaybin karaa caaga-joojiyaha antibiyoogga, caaga-joojiyaha dawada noolaha, caaga-joojiyaha daawada buufinta iyo faleebada iwm.
Siringe la tuuri karo oo caafimaad
Muuqashada saliingaha la tuuri karo ee daawaynta waa kacaan-samaynta waayaha ee dhinaca qalabka caafimaadka. Habka sawiridda ama duritaanka gaaska ama dareeraha irbadda waxaa loo yaqaannaa duritaanka. Silinjka cirifka hore oo leh dalool yar oo u dhigma usha xudunta u ah piston, oo loo isticmaalo in lagu duro qadar yar oo dareere ah ama habka meelaha kale ee aan la geli karin ama meesha, wakhtiga usha xudunta u soo jiid dareere ama gaas godadka hore ee dhululubada nuugista, mandrel waa moodada in la tuujiyo dareeraha ama gaaska.
Amber Clear Tubular Tijaabooyin Dhalo Nadiif ah oo loogu talagalay Dawooyinka
Amber clear tubular irbad dhalo dhalo nadiif ah oo dawooyin ah: Duritaanku waxa loola jeedaa duritaanka dareeraha ama gaasta jidhka bini'aadamka iyada oo la adeegsanayo qalab caafimaad sida saliingaha ujeedada ogaanshaha, daaweynta iyo ka hortagga cudurrada. La mid ma aha qaadashada daawada. Daroogadu waxay si dhakhso ah u gaari kartaa qulqulka dhiigga ka dib duritaanka iyo ficil.
Shaashadda LED-ka ee la qaadan karo ee Kiimiko-daaweynta Caafimaadka Bamka faleebo ee saliingaha ee Isbitaalka
Shaashada kemotherabi ee la qaadan karo ee LED bamka faleebada saliingaha ee isbitaalka: Bamka faleebo badanaa waa qalab kontorool oo makaanik ama elegtroonig ah oo ka shaqeeya tuubada faleebada si loo xakameeyo heerka faleebada. Badanaa waxaa loo isticmaalaa xaaladaha mugga iyo qiyaasta dareeraha loo baahan yahay in si adag loo xakameeyo, sida marka la isticmaalayo madbacadaha, daawooyinka ka hortagga arrhythmic, dareeraha xididka ee dhallaanka, ama suuxinta xididdada. Kuwa soo socda oo ay weheliyaan codsi wax ku ool ah oo kiliinikada ah si looga hadlo hawl maalmeedka, dayactirka iyo ilaalinta bamka faleebo waa in fiiro gaar ah loo yeesho dhibaatada.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Qalabka Durida iyo Faleebada oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Qalabka Durida iyo Faleebada soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Qalabka Durida iyo Faleebada la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.